Yurub - BBC News Somali
Ma dooneysaa inaad sare u qaaddo awoodda xifdiga aad u leedahay, halkan kaga bogo talooyinka ay khubarada soo jeedinayaan.
Cuntooyinka caafimaadka ku wanaagsan mustaqbalka soo socda.
Waxay arrintu ka billaabatay labo ruux oo cashaynaysay ayaa ka cawday in cunto khaldan loo keenay ka dibna rabshad ayay ku dambaysay, sida ay sheegeen booliiska waqooyiga Austria.
Wiil yar oo Jarmalka u dhashay ayaa booliiska Spain ka caawiyay sidii ay ku heli lahaayeen maydka hooyadii iyo wiil ay walaalo yihiin oo toban jir ah, kuwaas oo lagu tuuray bohol ku taalla jasiiradda Tenerife.
Qubrus: Nin qirtay in uu toddobo dumar ah dilay
Nin Qubrus ku sugan ayaa qirtay in uu dilay toddobo dumar ah iyo gabadh, arrintaas oo warbaahinta gudaha ee dalkaasi ay ugu yeertay "ninkii ugu horreeyay ee dad badan laaya".
Amiir William-ka Britain oo la kulmaya dadkii 2 masaajid lagu weeraray
Turkiga: Laba bilood kaddib waxaa na soo gaaraya gantaallada S-400
Turkiga ayaa sheegay inuu waxba ka beddelayn heshiiska uu Ruushka kaga soo iibsanayo gantaallada lidka diyaaradaha ee S-400 uu Ruushka sameeyo.
Gorgor looga shakiyey inuu jaajuus yahay oo la qabtay iyo dowlad sheegatay iney shimbirku iyadu leedahay.
Dadka magangalyo doonka ah iyo booliska ayaa gacanta isula tagay
Waddamada ugu danbeeyey aqoonsaday baasaboor Soomaaliga waxaa ka mid ahaa wadanka Luxemburg.
Weerarkii New Zealand: wa ayo dadka lagu laayay weerarkii masaajidda?
Waxaa soo baxaya faahfaahinta 50kii ruux ee lagu dilay labada masaajid inkastoo aan la shaacin magacyada oo dhamaystiran.
2 Musharrax oo isku magac ah ayaa u taagan doorashada madaxweynaha
Siyaasiyiintan ay magacyadooda isku midka yihiin ayaa walaac laga qabaa iney jahwareer ku ridaan dadka codadkooda ka dhiibanaya doorashada
Xayawaan ay u gurmadeen iyagoo moodaya mid la xannaaneysto ayaa ku noqday bahal caan ah oo dadka cuna
Ka warran haddii adigoo badbaadinaya xayawaan aad u maleyneysay kuwa la xannaaneysto uu kugu noqdo bahal halis ah?
Mr Cosar iskuma uusan dayin inuu qariyo wixii uu sameeyay aad ayuuna ugu faraxsan yahay falkaas
"Gabadhii aan la noolaa oo muddo i garaaci jirtay ayaa la xukumay"
Alex gabadha ay wada noolaayeen ayaa noqotay haweeneydi ugu horreeysay ee lagu soo eedeeyey xad gudub ay ninkeeda u geysatay ayey xukun ku ridday maxkamad ku taallo dalka Britain.